China Silicone Foley Catheter ine Kupisa Kuongorora fekitori uye vagadziri | Kangyuan
Kurongedza: 10 pcs / bhokisi, 200 pcs / katoni
Saizi katoni: 52x34x25 masendimita
Iyo inoshandiswa kune yakajairika kiriniki urethral catheterization kana urethral drainage yekuenderera ichiongorora yevarwere 'bladder tembiricha ine tarisisa.
Ichi chigadzirwa chinoumbwa nerethral drainage catheter uye tembiricha yekushisa. Urethral drainage catheter ine catheter muviri, chibharumu (mvura sac), gwara remusoro (tip), drainage lumen interface, kuzadza lumen interface, tembiricha yekuyera lumen interface, yekumhanyisa lumen interface (kana kwete), yekumhanyisa lumen plug (kana kwete) uye mweya vharafu. Template probe ine tembiricha yekuongorora (thermal chip), plug interface uye inotungamira waya kuumbwa. Catheter yevana (8Fr, 10Fr) inogona kusanganisira waya yekufambisa (sarudzo). Iyo catheter muviri, inotungamira musoro (tip), chibharumu (mvura saga) uye yega lumen interface inogadzirwa nesilicone; vharuvhu yemhepo inogadzirwa ne polycarbonate, ABS plastiki uye polypropylene; iyo plug yekumvura inogadzirwa nePV uye polypropylene; waya waya inotungamirwa nePET mapurasitiki uye tembiricha yekuongorora inogadzirwa nePV, ​​fiber nesimbi zvinhu.
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa ne thermistor iyo inonzwa iyo yepakati tembiricha tembiricha. Chiyero chekuyera chiri 25 ℃ kusvika 45 ℃, uye iko kuita kuri ± 0.2 ℃. Masekondi zana nemakumi mashanu ekuenzanisa nguva inofanira kushandiswa kusati kwayerwa. Iyo simba, chinobatanidza kupatsanura simba, chibharumu kuvimbika, kukombama kushora uye kuyerera chiyero chechigadzirwa ichi chinosangana nezvinodiwa zve ISO20696: 2018 standard; sangana nemagetsi ekuenderana nemagetsi anodiwa eIEC60601-1-2: 2004; sangana nechengetedzo yemagetsi zvinodiwa zve IEC60601-1: 2015. Ichi chigadzirwa hachina kuchena uye sterilized ne ethylene oxide. Iyo yakasara huwandu hwe ethylene oxide inofanira kunge isingasviki gumi μg / g.
Zvinyorwa / Magadzirirwo
Kodhi yekodhi kodhi
Chirevo cheFrance (Fr / Ch)
Chezita rekunze dhayamita ye catheter pombi (mm)
wechipiri lumen, wechitatu lumen
Chechipiri lumen, chetatu lumen, kunze lumen
1. Lubrication: iyo catheter inofanira kuzorwa nemushonga wekurapa usati waiswa.
2. Kuisa: isa iyo yakakora catheter mukati meiyo urethra kuenda kudundira zvakanyatsonaka (weti inoburitswa panguva ino), wobva waisa 3-6cm uye woita kuti chibharumu chipinde zvachose mudundira.
3. Inflating mvura: Uchishandisa sirinji isina tsono, kufufura chibharumu nemvura isina kuchena yakasvibiswa kana 10% glycerin aqueous solution inopihwa. Yakakurudzirwa vhoriyamu yekushandisa inoiswa mucherechedzo wecatheter.
4. Tembiricha kuyera: kana zvichidikanwa, taura yekunze yekupedzisira interface yeiyo tembiricha yekuongorora pamwe nesocket yeiyo yekutarisa. Tembiricha yevarwere inogona kuongororwa munguva chaiyo kuburikidza nedhata rinoratidzwa necomputer.
5. Bvisa: Paunenge uchibvisa catheter, tanga wapatsanura tembiricha yekudhirainha kubva pane yekutarisa, isa sirinji isina chinhu isina tsono muvhavha, uye nekukweva mvura isina kuchena mubhaluni. Kana huwandu hwemvura iri mujekiseni iri padyo neiyo jekiseni, iyo catheter inogona kuburitswa zvishoma nezvishoma, kana iyo chubhu yemuviri inogona kudimburwa kubvisa catheter mushure mekukurumidza kubuda.
6. Kugara: Nguva yekugara inoenderana nezvinodiwa pakiriniki uye nezvinodiwa zvekuyamwisa, asi nguva yekugara yakakwana haifanirwe kudarika mazuva makumi maviri nemasere.
1. Yakakomba urethritis.
3. Kukundikana kweiyo intubation yekutsemuka kwepelvic uye kukuvara kwerethral.
4. Varwere vanoonekwa sevasina kukodzera nevarapi.
1. Paunenge uchizora catheter, usashandise mafuta ane mafuta ane substrate. Semuenzaniso, kushandisa mafuta eparafini semafuta kunokonzera kuputika kwebhaluni.
2. Saizi dzakasiyana dzemaketani dzinofanira kusarudzwa zvinoenderana nezera risati rashandiswa.
3. Usati washandisa, tarisa kuti catheter haina kumira zvakanaka here, kuti kana chibharuma chiri kubuda kana kuti kwete, uye kana iko kukweva kwacho hakuna kumira mushe. Mushure mekubatanidza tembiricha yekuongorora tembiricha pamwe nemonitor, ingave iyo data inoratidzwa haina kujairika kana kwete.
4. Ndokumbira utarise usati washandisa. Kana chero chinhu chimwe chete (chakazara) chigadzirwa chikawanikwa chine mamiriro anotevera, zvinorambidzwa zvachose kushandisa:
A) kupfuura yekupera zuva rekuperesa;
B) pasuru imwe yechigadzirwa yakanganisika kana ine zvinhu zvekunze.
5. Vashandi vekurapa vanofanirwa kutora zvinyoro nyoro panguva yekudhakwa kana yekudzora, uye vachengete zvakanaka murwere chero nguva panguva yekugara catheterization kudzivirira tsaona.
Chinyoro chakakosha: apo iyo weti chubhu inogara mushure memazuva gumi nemana, kuitira kudzivirira iyo chubhu inogona kutsvedza nekuda kweiyo chaiyo volatilization yemvura isina kuchena mubhaluni, vashandi vezvokurapa vanogona kupinza mvura isina kuchena mubhaluni mune imwe nguva. Iyo nzira yekuvhiya inotevera: chengeta iyo weti chubhu munzvimbo yakachengetedzwa, dhonza mvura isina kuchena kubva mubhaluni nesirinji, wozobaya mvura isina kuchena mubharuni zvinoenderana nemazita ezita.
6. Pfekedza gwara rinotungamira mukati merineni remvura yecatheter yevana seyunobatsira yekubatsira. Ndokumbira utore waya yemutungamiriri mushure mekudhakwa.
7. Ichi chigadzirwa chakaomeswa neethylene oxide uye ine nguva inoshanda yemakore matatu kubva pazuva rekugadzirwa.
8. Ichi chigadzirwa chinoraswa kushandiswa kwechipatara, chinoshandiswa nevashandi vezvokurapa, uye chinoparadzwa mushure mekushandisa.
9. Pasina ongororo, inodzivirirwa pakushandisa pakuvheneka kwenyukireya magineti resonance system kudzivirira kukanganisa kunogona kuitika kunogona kutungamira mukukanganisa tembiricha yekuyera.
10. Ikozvino kuburitsa kwemurwere kunoyerwa pakati pevhu uye thermistor pa110% yeiyo yepamusoro yakatarwa network kupa magetsi voltage.
1. Inotakurika yakawanda-paramende yekutarisa (modhi mec-1000) inokurudzirwa pachigadzirwa ichi;
2. ini / p: 100-240V-, 50 / 60Hz, 1.1-0.5A.
3. Ichi chigadzirwa chinoenderana neYSI400 tembiricha yekuongorora system.
Electromagnetic Kuenderana Matipi
Ichi chigadzirwa uye chakabatanidzwa cheki yekutarisa michina inotora matanho chaiwo maererano nemagetsi anowirirana (EMC) uye ichaiswa uye ishandiswe zvinoenderana neruzivo rwemagetsi remagetsi rinotsanangurwa mune uyu kuraira.
Chigadzirwa chinofanira kushandisa tambo dzinotevera kusangana nezvinodiwa nekubuda kwemagetsi emagetsi uye kupokana-nekukanganisa:
Mutsetse wemagetsi （16A）
2. Kushandiswa kwezvishongedzo, ma sensors uye tambo kunze kweiyo yakatarwa renji zvinogona kuwedzera kubuda kwemagetsi yemagetsi uye / kana kudzora hutachiona hwemagetsi emidziyo.
3. Ichi chigadzirwa uye chakabatanidzwa chekutarisa chishandiso hachigone kushandiswa padhuze kana kuunganidzwa nemamwe maturusi. Kana zvichidikanwa, kunyatso tarisisa uye ongororo ichaitiswa kuti isimbise mashandiro ayo akajairwa mukugadziriswa kunoshandiswa.
4. Kana chiratidzo chekupinza chakadzikira pane chakadzika chinotsanangurwa mumatanho ehunyanzvi, kuyerwa kunogona kunge kusiri iko.
5. Kunyangwe kana imwe michina ikateerana nezvinodiwa zvekutanga zveCISPR, zvinogona kukonzera kupesana nemidziyo iyi.
6. Zvinotakurika uye nharembozha zvekutaurirana zvinokanganisa mashandiro echigadzirwa.
7. Mimwe michina ine RF emission inogona kukanganisa chimbo (semuenzaniso foni, PDA, komputa ine waya isina waya).
Pashure: Laryngeal Mask Airway Yekushandisa Imwechete
Zvadaro: 2 Nzira Silicone Foley Catheter ine Tiemann Tip
catheter ine tembiricha yekuongorora
catheter ine tembiricha yekunzwa
foley catheter ine tembiricha yekushisa
foley catheter ine tembiricha sensor
silicone catheter ine tembiricha yekuongorora
silicone catheter ine tembiricha sensor
silicone foley catheter ine tembiricha yekuongorora
silicone foley catheter ine tembiricha sensor
tembiricha sensig silicone catheter
tembiricha yekuona catheter
tembiricha ichiona foley catheter
tembiricha ichiona silicone foley catheter
tembiricha ichiona urethral catheter
tembiricha sensinh foley catheter
urethral catheter ine tembiricha yekuongorora
urethral catheter ine tembiricha sensor
weti catheter ine tembiricha yekuongorora
weti catheter ine tembiricha sensor
Silicone Urinary Foley Catheter ine Temperatur ...